June 24 at 9:44pm
ကျွန်မနာမည်က ခိုင်လော့နွမ်းပါ.. ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ... ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်ပါတယ် ... ကျွန်မဟာလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး နေ့စဉ် ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေပေမယ့် ယေရှုခရစ်တော်ဟာ ဘုရားသားဖြစ်ပြီး ကားတိုင်ပေါ်မှာ
Read more: ကျန်ုပ်တို့ဆုတောင်းရန်မလိုသောနေ့ဟူ၍ မရှိပါ။...
He healed his painful disease by reading Gospel palm.leaf , his year long disease was HEALED. Palm.Leaf is distributed at Saya U Kyaw Mya's clinic, Pathein and posted here.
Now he is attending our sunday service regularly. ReadingaBible given by Clinic.
Read more: Testimony by Ko Win Zaw Oo.
Read more: ကံတရား နဲ့ ဘုရားသခင် (၁)
ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမ ၁၉မိုင် သိန္ဒိအောင်မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ရှိတဲ့လမ်းအတိုင်း ကားမောင်းသွားရင် တမိုင်လောက်မှာ ရောက်ပါတယ်။ မိုးရာသီဖြစ်တော့ ပတ်ဝန်းကျင် စိမ်းလန်းစိုပြေနေပြီး ရော်ဘာပင်၊ သီဟိုပင် စိုက်ခင်းများရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့
Read more: ဒေါင်းမီးခွက်ရွာ သခင်ဘုန်းတော်ကျမ်းစာသင်တန်း...
မုရန်အဖွဲ့မှ ဝိညာဉ်ရေးစာအုပ်၂အုပ် 2015
စင်ကာပူနိုင်ငံ Grace Baptist Church . မြန်မာမိတ်သဟာရမှ ဆရာအောင်နိုင် ပြုစုပြီး ရန်ကုန်မြို့မှ ဆရာစောစံအောင် တည်ဖြတ်ထုတ်ဝေတဲ့ စာအုပ်များထဲက ၂အုပ်ပါ။
၁။ ခရစ်ယန်အသက်တာ အသက်ရှင်ခြင်းသင်ခန်းစာများ (၂၄)ခု
Read more: မုရန်အဖွဲ့မှ ဝိညာဉ်ရေးစာအုပ်၂အုပ် 2015
ဆရာစိုးသီဟ (Rev. Dr) ကောင်းကင်လမ်းကို ကျိုးစားတက်မည် သီချင်း